www.yeyethaton Blogspot.com မှမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါသည်...ယခုလိုဆုံတွေရတာ မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်....
Microsoft Office 2007 Full Version လေးပါ။ Key ဖိုင်ပါတစ်ခါတည်းတင်းပေးထားပါတယ်။
Download Link : Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Key
Microsoft Office Professional 2007 Full version လေးပါ ကျွှန်တော် စက်မှာသုံးဖို့ မနေ့ညကမှ ဒေါင်းထားတာ၊ လိုချင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေလဲ သုံးရအောင်ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်၊ ဆော့ဝဲလ်ကို keys လေးထည့်ပီး Install လုပ်လိုက်ရင် Full Version လေးဖြစ်ပါပီ။ ဒါပေမဲ့ Activate မလုပ်ရင် 24 ကြိမ်ပဲ အသုံးပြုလို့ရပါမယ်၊ Activate လုပ်ဖို့အတွက် Microsoft Office ကိုဖွင့်လိုက်ရင် Activate ဘောက်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်၊ အဲမှာ Activate လုပ်ဖို့ ရွေးစရာ ၂ နည်းရှိပါတယ်၊ ပထမက လိုင်းနဲ့ မိမိစက်ပေါ်ကနေ လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒုတိယ နည်းက Phone နဲ့လုပ်နည်း။ နော်ကတော့ Phone နဲ့လုပ်လိုက်ပါတယ်၊ နိုင်ငံရွေးပါ၊Microsoft Office ကို ခေါ်ရန် phone နံပါတ်၂ ခုပေါ်လာပါလိမ်မယ်၊ ကြိုက်ရာခေါ်ပီးတော့ Press2 ကိုရွေးပါ။ (အင်္ဂလိပ်လိုပဲရပါမယ်) ခဏစောင့်ပီး ဖုန်းကိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက် ID နံ့ပါတ်တောင်းတဲ့အခါ Activate ဘောက်မှာတွေ့ရတဲ့ နံပါတ်တွေပြောပါ။ စက်ဘယ်နှစ်လုံးအသုံးပြုမှာလဲ လို့လဲ မေးပါတယ်။ ပီးတာနဲ့ Activate ဖြစ်ဖို့ရေးရမဲ့ နံပါတ်တွေ သူကပြောပါလိမ့်မယ် လိုက်ရေးပီး Next လုပ်လိုက်ရင် Activate ဖြစ်ပါပီ၊ အမြဲသုံးလို့ရသွားပါပီဗျာ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 388MB ဆိုတော့ နည်းနည်းများ၏။ ဒါပေးမဲလဲ့ 2010 တိ်ု့ 2013 တို့ဆိုရင် 600MB တောင်၇ှိတာ။ 2007 ကတော့နည်းနည်းလေးသက်သာတယ်လေ။ - See more at: http://khithitmaung.blogspot.com/2013/06/download-microsoft-office-professional.html#.U4tTun_IvIU
Posted by သထုံသား Blog No comments:
Back Track5r3 32x လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Wifi Hack ချင်သူများအတွက် ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ WEP-WPA-WPA2 အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ Hack ဖို့တော့လိုပါတယ်။ D; အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအောက်မှာဒေါင်းသွားလိုက်ပါ။ 3.09 GB ရှိပါတယ်။ File6ဖိုင်ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ဖိုင်ကို 600MB စီခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။
Labels: Wifi Tool
Blog မှာအလွယ်ကူဆုံး Facebook Like Box ထည့်နည်း
Windows 8.1 Enterprise [x86-x64]
Windows 8.1 Enterprise [x86-x64] [English] Including latest Updates May 2014 (1.13 Gb)
Windows 8.1 Enterprise [x86-x64] [English]ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီ Edtion မှာ
Latest Updates များအားလုံးပါဝင်ပြီး ဖိုင်ဆိုဒ်ကလဲ Real File Size ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထား
တဲ့ အတွက် ဒေါင်းလုပ်သူများ အဆင်ပြေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဝင်းဒိုးလန်းလန်းလေး ကြိုက်သူများ အတွက် Windows7Ultimate SP1 Android Edition 2014 - X86 - X64 (2.5 GB)
Windows အလန်းလေးတွေ ကိုမှ ကြိုက်ပါတယ်၊ကစား ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့သူများ အတွက်
2014 March လထွက် Windows7Ultimate SP1 Android Edition 2014 - X86 - X64
ကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။Desktop Icon.Theme,Wallpapers မှအစ Android ဖုန်းပုံစံ အတိုင်း
Modify လုပ်ပေးထားတဲ့ Windows Edition တခုဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာစသုံးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အသုံးလိုမယ့် pdf စာအုပ်လေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာချင်ကြသူများ အောက်မှာဒေါင်းပြီး လေ့လာကြပါ...အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ...
Chin Lay နားခိုပါ
ချင်းလေး ရဲ့ အမြဲတမ်းနားခိုပါ သီချင်း Album လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် နားမထောင်ရသေးသောသူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ.......
Download Link : chinn_lay.rar
Big Bag ရဲ့ One Eleven Album
Big Bag ရဲ့ Album အသစ်လေးနားထောင်ချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် One Eleven Album လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Rock ပရိတ်သတ်များအတွက် Reason ရဲ့ ပင်လယ်ထဲကမြစ်များ Album လိုက်နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သယ်ရင်းတို့ရေ အောက်မှာေါးင်းသွားပေတော့....
Download Album : Reason_-_Pin_Lal_Htel_Ka_Myit_Myar_.rar
Android Game အလန်းလေးတွေ ကစားချင်သူများအတွက် စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ကြည့်ပြီးတော့ ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ...
Download Link : zombiesniper.apk
ရဲရဲသထုံ Blogspot.com မှကြိုဆိုပါသည်..
ရနေ့ကြွလာ မိတ်သဟာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေ...
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျား....
ရဲရဲသထုံ. Travel theme. Powered by Blogger.